Madaxweyne Biixi Oo Laga Codsaday In Uu Mar Kale Sameeyo Cafis - Ilays News
Madaxweyne Biixi Oo Laga Codsaday In Uu Mar Kale Sameeyo Cafis
Cafiskii madaxweynaha ee soo baxay 1-dii April 2020 waxa loogu tallo galay in lagu yareeyo cidhiidhiga ka jira xabsiyada Somaliland loona xakameeyo fiditaanka coronavirus. 574 maxaabiis ah ayaa la cafiyey. Iyada oo ay ahayd tallaabo mudan in la bogaadiyo, hadana cidhiidhigii weli wuu jiraa sababtoo ah cafisku inta uu gaadhayo ayaa koobnayd. Kumay jirin dadka xukunku ku dhacay ee ku jira saldhigyada booliska ama maxaabiista aan dhammaysan ugu yaraan kala badh mudadii xukunkooda. COVID-19 wuu ku sii fidayaa Somaliland xabsiyadaa cidhiidhiga ahina waxa ay halis weyn ku hayaan caafimaadkii bulshada. Waxa aanu ku boorinaynaa Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu soo saaro cafis labaad oo intii hore ka ballaadhan.
Cafiska labaad waxtarkiisu wuu ka ballaadhnaan doonaa kii hore haddii tixgelin la siiyo laguna daro: